ပုလင်းဦးထုပ်ခြမ်းပူတံဆိပ်ခေါင်းစက်, ဦးထုပ်ဘက်များအတွက်ပူစိုင်းစက်, ပုလင်းဦးထုပ်ပုံနှိပ်စက်-HCmachine-Gofair Chinese China Manufacturer Supplier Factory
Burmese ပုလင်းဦးထုပ်ခြမ်းပူတံဆိပ်ခေါင်းစက်, ဦးထုပ်ဘက်များအတွက်ပူစိုင်းစက်, ပုလင်းဦးထုပ်ပုံနှိပ်စက်
အသုံးပြုမှု: အလိုအလျောက်ပုလင်းဦးထုပ်ပူစိုင်းစက်သူတို့အားပတ်ပတ်လည်နှင့်မမှန်ပုလင်းထုပ်ပေါ်နေမှုကိုချေဖျက်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်လှိမ့သတ္တုပါးများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာပုလင်းဦးထုပ်၏ဘေးထွက်အပေါ် print ထုတ်။
1: စုစုပေါင်း Wattage လောင်: 2.2KW;
2. အပူချိန် Range နေမှုကိုချေဖျက်: 20-300 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်,
3. လေထုဖိအား Compress: 0.6MPA;
4. ထုတ်ကုန်များအချင်း: က DIA: 15-34MM L ကို: 25-60MM
5. မက်မြန်နှုန်းနေမှုကိုချေဖျက်: 4200pcs / နာရီ
6. အပြင်အတိုင်းအတာ: * 140 210 * 230CM
7. Net ကအလေးချိန်: 800KG